देउवा नेपाली कांग्रेसको जीवनमा सबैभन्दा निकम्मा सभापति —-जगदीशनरसिंह केसी::KhojOnline.com
नुवाकोट (ककनी) । नेपाली कांग्रेसका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले शेरबहादुर देउवालाई ‘निकम्मा सभापति’ को उपमा दिएका छन् । देउवा नेपाली कांग्रेसको जीवनमा सबैभन्दा निकम्मा सभापति भएकाले अब उनीबाट पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने केसीको ठहर छ ।
‘उहाँ (देउवा) प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको मात्रै सभापति हुनुभयो । विमलेन्द्र निधी, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशशरण महतलाई मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो,’ केसीले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने उहाँ प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको मात्रै नेता हुनुभयो । अब उहाँबाट पार्टी चल्दैन ।’
केसीसँग जिल्ला सभाापतिहरुको भेलाको सन्दर्भ अनि कांग्रेसको अवस्थाबारे ककनीमा अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी-
यसअघि चुनावमा टिकट वितरण गर्दा तल्लो तहलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने तपाईहरुको माग थियो । अबचाहिँ जिल्ला सभापतिहरुलाई विधानमा के-के अधिकार चाहियो ?
सभापतिहरुको भेलामा कस्ता-कस्ता विषय उठे ?
अधिकांश सभापतिहरुले अनुशासनका कुरा उठाउनुभएको छ । विधानलाई पूर्णरुपले पालना गर्ने/नर्गने कुरा, विधानको पालना नर्गनेलाई गर्ने के ? हामीसँग कुनै मेकानिज्म नै भएन । नगरे पनि हुने, गरे पनि हुने ।
हरेक महाधिवेशनमा विधान बनाउनुपर्ने र हरेक महासमिति बैठकमा संशोधन गर्नुपर्ने ? यस्तो त भएन । कम्तिमा दुई/तीनवटा महाधिवेशनसम्म एउटा विधान चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसैले यो हामी विधानलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौं । विधानको मर्मलाई बुझेर सबैले काम गर्नुपर्छ र हामी सबै सभापतिहरुले पार्टीको विधानलाई सशक्त बनाउन सहयोग र दवाब दिनुपर्छ । अब हुने कांग्रेस सशक्त हुनुपर्‍यो, सुदृढ हुन पर्‍यो भन्ने कुरा नै छलफलमा आए ।
अब अलिकति कांग्रेसको आन्तरिक जीवनबारे कुरा गरौं, जिल्ला तहबाट हेर्दा सिंगो पार्टी कहाँ-कहाँ चुक्दैछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
शेरहादुर देउवा सभापति भएपछि गुटैगुट भयो । तर, योभन्दा पहिले दुईवटा टिम हुन्थ्यो । एउटा टिममा भोट हाल्थे, अर्कोले हार्थ्यो । एकखालको वातावारणमा मिल्दै जान्थ्यो । अहिले चाँहि गुटैगुट भयो । उहाँ कांग्रेसको भन्दा गुटको मात्रै सभापति हुनुभयो । त्यसकारण गुटको नेताले कांग्रेसको पार्टी सभापति हुने हैसियत राख्नुहुन्न ।
केन्द्र र प्रदेशसभामा सभामुख/उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने, छायाँ सरकार गठनका कुरा सभापतिकै कारण नभएको कि यसमा अन्य नेताहरु पनि बोलेनन् ?
धेरै घटनाक्रमलाई छाड्दै हिँड्यो नेतृत्व । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । अहिले सौभाग्य कम्युनिस्टका, दुर्भाग्य हाम्रा ! सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुँदा नेपालको संबिधान मिचियो, हामीले केही दिन बोल्यौं । तर, अहिले हामी सिथिल भयौं । बोल्न छाड्यौं । यो त नेतृत्व नै होइन जस्तो भयो । यो त नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा निकम्मा नेतृत्व हो ।